ထားဝယ်မြို့၊ ဆိပ်ကမ်းသာခန်းမမှာ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ကပြု လုပ်တဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းရေးပွဲကို တွေ့ရစဉ်
Photo: Tavoyan Voice
တနင်္သာရီတိုင်း ထားဝယ်မြို့ကို ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခတွေ မကူးစက်လာစေဖို့အတွက် ဘာသာကြီးလေးခုက ကိုယ်စားလှယ် ၈ ဦးပါဝင်တဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုကော်မတီတစ်ခုကို ဒီကနေ့ ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။
ထားဝယ်မြို့ ဆိပ်ကမ်းသာခန်းမမှာ ပြုလုပ်တဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းရေးမျက်နှာစုံညီတွေ့ဆုံပွဲမှာ ဖွဲ့စည်းလိုက်တာလို့ ကော်မတီဝင်တစ်ဦးက RFA ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ ဒီကနေ့ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းရေး အခမ်းအနားတစ်ခုကို ကျင်းပခဲ့ပြီး ပဋိပက္ခမဖြစ်ပေါ် လာရေးအတွက် ဘာသာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုကော်မတီတစ်ခုကို အဖွဲ့ဝင် ၈ ယောက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ ဘာကြောင့်ဖွဲ့ရသလဲ ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများကို လေ့လာကြည့်တဲ့ အခါမှာ ဒေသခံတွေအချင်းချင်းစတင်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲ တခြားဒေသကလူများက လာရောက်သွေးထိုး လှုံ့ဆော်ရာက စခဲ့လို့ပါပဲ၊ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ထားဝယ်ဒေသကို ဒီလိုပဋိပက္ခမဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုတင် ပြီးတော့ စောင့်ကြည့်တားဆီးနိုင်အောင်ဖွဲ့လိုက်တာပါ”
ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးနဲ့ ပက်သက်တဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိခဲ့ရင် အဲဒီကော်မတီက အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီကနေ့အစည်းအဝေးကို ဘာသာကြီးလေးခုက ခေါင်းဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ ဒေသခံ ၁၀၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ှုွငါလည်း အဲဒီတုန်းက ထားဝယ်မှာ ရှိခဲ့တာပဲ။ ဘာမှ မသိလိုက်ပါလား။ ငါတို့ထားဝယ်ဒေသခံဆရာတော်တွေရော သိကြရဲ့လား။ လက်ခံကြရဲ့လား။ တခြားဒေသက အစိုးရလက်အောက်ခံ ဆရာတော်တွေ လာလုပ်သွားကြတယ် ထင်ပါ့။ ငါတို့လည်း ထားဝယ်ဒေသခံဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့ အမြဲတမ်း အသွားအလာရှိတာပဲ။ ဆရာတော်ကြီးတွေလည်း ဘာမှ မမိန့်ကြပါလား။ ဘာကြီးလဲ မသိဘူး။ အဓိကဆရာတော်ကြီးတွေ သိသင့်တယ်။
While our friends of Tavoyans are reading this article, may I request about our own feelings about what we have suffered. Our land in front of Zaygyee (corner of Anaut Yat & U Kyaw Yin) was burned down in 1991, and was occupied unfairly by the Ministry of Information n KhaWaTa. We claimed several time, nothing happened, other land closed by, were given back to their previous owners, except us. Our great grand father was legally registered in Tavoy Register court in 1928. We want our land back. The Authorities means for their own sakes. Anyway, it isavery unpleasant robbery. We need to get our land back, because we have owned it for nearly 100 years, as all Tavoyans knows.
Jun 02, 2013 10:11 AM
Whay, noe dawei thar tway,noe dawei mha air myo,Gan lu zee tway wan la ha Dhihtar kae.Air myo see yone zar kaung air.Air mha sa,byr lea ho mar na saing ya.
Jun 02, 2013 07:18 AM